Fahafatesana tampoka :: Miaramila voatifitry ny basy teny an-tanany • AoRaha
Heverina ho ny basy “kalachnikov” teny aminy ihany no nahatifitra tsy nahy ny miaramila iray mitondra ny galona kilasy faharoa, manodidina ny telo amby roapolo taona. Voa teo amin’ny ranjony izy ary nitarika tamin’ny fahafatesany, fotoana vitsy taorian’ izay. Tany amina tanàna iray ambanivohitr’i Maevatanàna no nisehoan’izao fahafatesana mpitandro filaminana izao, tamin’ ny alin’ny alarobia lasa teo tokony ho tamin’ny 7 ora.
Ao anatin’ny Vondrona miaramilan’ny tafika mpampandry tany (ZRPS) avy aty an-drenivohitra no nalefa namita iraka tany amin’iny faritra Maevatanàna iny ity miaramila niharam-boina. Teo am-piomanana hanao fisafoana amin’ny alina teo amina tanàna iray izy sy ny namany, tamin’ny fotoana nisehoan’ny loza.
“Tsy nisy nahita ny zava-niseho. Tao an-trano io miaramila io. Tany ivelany ny namany. Poa-basy indray mandeha no nanaitra azy ireo sy ny fokonolona. Ilay miaramila efa naratra mafy no hita. Mety ho nikitika ny basiny izy ka nahatifitra tsy nahy ny tongony. Tsy nisy zavatra hafa nampiahiahy, tamin’io fotoana io”, hoy ny zandary any Maevatanàna nanao ny fanadihadiana.
Nentina tany amin’ny hopitaliben’i Maevatanàna ilay maratra. Tsy tana ny ainy noho ny fahaverezan-dra be loatra. “Nalevina eto Maevatanàna ny razana noho ny tsy fahazoana mitondra izany any an-drenivohitra, toerana niaviany, amin’izao hamehana arapahasalamana izao. Nisy solontenan’ny fianakaviana tonga niatrika izany”, hoy ihany ny zandary.
Voina tany Antsohihy Lehilahy maty sempotra tao anaty fiara mpitatitra solika
Fifindrana amin’ny rivotra :: Mety ho azo ao anatin’ny efitrano tery ny Covid-19
Fisolokiana :: Kaomiserana polisy migadra eny Antanimora